Nagarik Shukrabar - आरम्भको रंगमञ्चीय देउसी
मङ्गलबार, १४ कार्तिक २०७४, ०१ : ४९ | राेहित रार्इ
भैलेनी आइन, आगन..गुन्यु चोली मागन...! ए है भन भन भाई हो.., देउसी रे...! नेपालीहरुको दोस्रो ठूलो चाड तिहार (यमपञ्चक)को तेस्रो दिन साँझमा लक्ष्मी पूजा सकेपछि घरघरमा गुञ्जिने आवाज हुन् यी । तिहारमा देउसी–भैलो खेल्ने परम्परा उहिल्यैदेखि चलिआएको हो । युवा, बुढापाका, महिला टोलीहरु भट्याउदै देउसी खेल्ने वा गाउदै भैलो खेल्ने तिहारको मौलिक संस्कृति हो । पछिल्लो समयमा भने देउसी भैलोको मौलिकता हराउँदै गएको छ । विभिन्न संघसंस्था वा समूहहरु आधुनिक एवं पाश्चात्य गीत, संगीत पस्कँदै देउसी भैलो खेल्न थालेका छन् । अधिकांश ती टोलीको उद्देश्य तिहारमा देउसी खेलेर संकलन भएको दक्षिणा(पैसा) आपसमा बाँडिचुँडी लिने वा पिकनिक गएर सिध्याउने हुन्छ ।
यसपालि भने धरानमा आरम्भ नाट्य डबलीले पृथक शैलीमा देउसी खेलेर सबैको ध्यान खिच्न सफल भयो । आरम्भको देउसी कार्यक्रमको नामै थियो, रंगमञ्चीय देउसी २०७४ । यो ब्यानरमा मात्र रंगमञ्चीय देउसी लेखिएको थिएन, आरम्भले देउसी साँच्चैको रंगमञ्चीय शैलीमा पस्किएको थियो । देउसीको लागि तोकिएको निर्धारित घर वा स्थानमा पुगेपछि कलाकारहरु ब्यानर झुण्ड्याउँथे । त्यसपछि सुरु हुन्थ्यो, फरक शैलीको रंगमञ्चीय देउसी । देउसी भैलोमा गाउनु, नाच्नु त सामान्य हो, तर आरम्भ भट्याउने, गाउन र नाच्नमा मात्र सीमित रहेन । देउसी कार्यक्रममा कवि तथा कलाकारहरुले सुन्दर कविताहरु पनि पस्किए । देउसीमा कविता वाचन गर्नु अचम्म हुने नै भयो ।
अझ आरम्भको रोचक रंगमञ्चीय देउसी त त्यसबेला हुन्थ्यो, जब ‘पाञ्चीते मामा’ नामको नाटक सडकमै मञ्चन हुन्थ्यो । यो नाटकले पनि राजनीतिक तथा सामाजिक विकृति, विसंगतिविरुद्ध प्रहार गर्दै दर्शकहरुलाई सचेत पनि गरायो । ‘फरक रंग, फरक स्वाद, फरक प्रस्तुती लिएर हामीले यसपालि रंगमञ्चीय देउसी खेल्यौं, यो देउसी घरघरमा रंगमञ्चीय संस्कृतिलाई पु¥याउने अभियान पनि हो,’ आरम्भका अध्यक्ष गोपाल देवानले भने, ‘त्यही भएर हाम्रो देउसी पनि अरुको भन्दा भिन्न, पृथक नै भयो ।’ आरम्भको देउसी प्रस्तुति वा शैलीका कारणले मात्र पृथक् भएको होइन । यो देउसीको उद्देश्य पनि दक्षिणा(पैसा) संकलन गर्नु थियो, तर त्यो आपसमा बाँडिचुँडी लैजान वा पिकनिक खाएर सक्न थिएन । आरम्भ थिएटर हल निर्माण गर्नको लागि देउसी खेलिएको थियो ।’ थिएटर हल निर्माण हुँदा आरम्भलाई मात्र फाइदा पुग्दैन, समाजलाई र सामग्र राष्ट्रकै कलाक्षेत्रले लाभ पाउने आरम्भको भनाइ छ ।
आरम्भले गत वर्ष पुस २४ गते धरान ४ स्थित खैरेनीटारमा थिएटर हलको सिलान्यास गरेको थियो । तर, आर्थिक अभावले थिएटर हल निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेन । आर्थिक संकटले थिएटर हल निर्माणको सपना अपुरो हुने देखिएपछि आरम्भले यो वर्ष फरक शैलीमा देउसी खेलेर आर्थिक सहयोग जुटाउने अभियान चलाएको हो । ‘रंगमञ्चीय संस्कृतिलाई फैलाउने अभियानअन्र्तगत यो देउसी पनि हो, साथै रंगमञ्चीय संस्कृतिलाई स्थायित्व दिन थिएटर हल चाहिन्छ, त्यसका लागि आर्थिक संकलन गर्ने उद्देश्य पनि हो,’ अध्यक्ष देवानले भने । चालिस र पचासको दशकमा नाटक(रंगकर्म)को उर्वरभूमि धरान अचेल रंगमञ्च (थिएटर)को अभावमा धेरै पछि परिसकेको रंगकर्मीहरुकै भनाइ छ ।
आरम्भ समूहको स्थापना २०४५ सालमा भएको थियो । २०५७ सालसम्म सक्रिय आरम्भले ३ दर्जन जति नाटक प्रदर्शन एवं मञ्चन गरेको थियो । लामो समय सुस्ताएको आरम्भले गत वर्षदेखि पुनरागमन जनाएको हो । यस बीचमा आरम्भले थुप्रै नाटक मञ्चन गरिसकेको छ भने नवकलाकारहरु पनि जन्माएको छ । तिनै नवकलाकारहरुलाई साथमा लिएर आरम्भले यसपाला पृथक् शैलीको रंगमञ्चीय देउसी खेल्यो । आरम्भको रंगमञ्चीय देउसीमा प्रवीण राई, कृष्ण तिम्सिना, पानस गुरुङ, दिलिप रोनाहाङ, कमानसिं यम्फु, दिपक तिम्सिना, शोभा बिक, गंगा मगर, सन्देश क्षेत्री, तीर्थ बिकलगायतले गायन, अभिनय, नृत्य पस्किए भने गोपाल देवान, राजकुमार कार्की, गोपाल प्रयास, सन्तोष थेवेलगायतले कविता सुनाए । कलाकारहरुले गीतहरु पनि पुरानो नोस्टाल्जिक गीतहरु प्रस्तुत गरेका थिए ।
जनता जगाउँदै हिमायती
पृथक् शैलीको देउसी खेल्ने क्रममा हिमायती सांस्कृतिक परिवारले पनि यसपालि तिहारमा ‘विकृति, विसंगति र भ्रष्टचारविरुद्ध हाम्रो अभियान’ भन्ने ब्यानर बोकेर देउसी भैलो खेल्यो । सांगीतिक अभियानबाट जनतालाई निरंकुश पञ्चातयी व्यवस्थाविरुद्ध जगाउने उद्देश्यले २०३८ सालमा हिमायतीको जन्म भएको थियो । प्रजातन्त्र स्थापनाको दसकपछि सुस्ताएको हिमायती गत वर्षदेखि पुनः सक्रिय भएको हो । देउसी भैलो कार्यक्रममा आफ्नो स्थापनाकालमा झैं हिमायतीले राज्य व्यवस्थाको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारविरुद्ध उभिन आफ्ना सांगीतिक प्रस्तुतिमार्फत आह्वान ग¥यो ।
हिमायतीका कलाकारहरुले अन्तिम हँुदैन कहिल्यै, संसार बनाउने यात्रा.., खोकु छिन्ताङ दुख्यो कि.., फिरेन सुदिन आएन वसन्त, छाएन सुवास..जस्ता जनताको गीत र नृत्यहरु पस्किएका थिए । हिमायतीको देउसीमा गायिका हर्षु राई, राधिका खत्री, जीवन भट्टराई, मनोज राई, १२ वर्षीय सावेला राई, भक्तिराज राई, माधव राई, महेन्द्र राईलगायतले गीत गाएका थिए । निरंकुश पञ्चायती व्यावस्थाविरुद्ध जनता जगाउन गाउँघरमा गाउदै हिडेको बेलाका गीतहरु र प्रजातन्त्र स्थापना पछि राजनीतिकमा देखिएको विकृति, विसंगतिले जनतामा छाएको निराशाहरुलाई पनि आफ्नो सांगीतिक प्रस्तुतीबाट कलाकारहरुले पस्किए । ‘अरुले जस्तो रमाइलो गर्न र पैसा उठाएर पिकनिक जानको लागि मात्र हामीले देउसी खेलेको होइन, हिमायतीको स्थापनाको उद्देश्य नै समाजको सुधार र परिवर्तन हो, यो हाम्रो देउसी भैलो कार्यक्रम पनि त्यही अभियानको निरन्तरता हो,’हिमायतीका अध्यक्ष हर्क चुम्मे भन्छन्,‘हिजो राजनीतिक व्यावस्था परिवर्तन गर्ने उद्देश्यको लागि सांगीतिक अभियान चलायौं, अहिले राज्य व्यावस्थामा भएको विकृति, विसंगति र भ्रष्टचार विरुद्ध अभियान जारी छ ।’
असहायलाई सहयोग गर्न देउसी
धरानका पत्रकारहरुको एउटा टोलीले पत्रिका बेचेर जीवन गुजारा गरिरहेका एक हकरको जीर्ण घर पुनर्निमाण गर्ने र दुर्घटनामा परी घाइते भएका यातायात मजदुरलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले देउसी खेल्यो । हकरका रुपमा काम गर्ने धरान ११, मकालु बस्ती(सुकुम्बासी) का ज्ञानबहादुर माझी शारीरिक रुपमा अशक्त पनि छन् । उनको दुवै खुट्टा र हात राम्रोसँग चल्दैन । त्यसमाथि हाल लडेर उनको एउटा हात भाचिएको पनि छ । यस्तै, अर्का घाइते यातायत मजदुर धरान १५, महादेव निवासी पुष्प प्याकुरेल हिडडुल गर्न सक्दैनन् । उनको ओछ्यानमा नै दिशा पिसाब गर्नुपर्ने बाध्यता छ । आर्थिक अभावले प्याकुरेल परिवारलाई बिहान बेलुकीको छाक टार्न नै धौ–धौ छ ।
पत्रकार महासंघ सुनसरीका पूर्व कोषाध्यक्ष एवं प्रदेश सभासद विकास चाम्लिङको नेतृत्वममा २ दिन देउसी खेलेर पत्रकारहरुले ३५ हजार २ सय ८५ रुपैया संकलन गरेका छन् भने माझीको घर निर्माण गर्न वडा १७ का अध्यक्ष मनोज भट्टराईले ४ वण्डल जस्ता पाता पनि सहयोग गरेको पत्रकार चाम्लिङले बताए । यो देउसीमा नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीम राई ज्वाला, धरानका अध्यक्ष कमल भट्टराई, मजदुर नेता गोविन्द गिरीलगायतले पनि साथ दिएका थिए । ‘रमाइलो गर्न देउसी सधै खेलिएकै हो, यसपाली फरकढंगले खेल्यौं । दुई जना मजदुरी गरेर खाने तर हाल ठुलो आर्थिक संकट व्यहोरेका व्यक्तिलाई सहयोग गर्न देउसी खेल्यौं,’ उनले भने ।